एक महिना वितिसक्दा पनि पिडामै छन् भजनीका बाढी पिडितहरु भन्छन्ः ‘नेताहरुको अनुगमनले मात्रै राहत दिँदोरहेनछ’
By Indu Kc
भजनी नगरपालिका ८ का कमल शाही आजभोलि सडकमा बास बसिरहेका छन । गत साउन १४ गते आएको बाढीले उनको बास सडकमा हुन पुगेको हो । बाढी आएको महिना दिन वितिसक्दा पनि उनी आफ्नो घरमा पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् । साउन १४ गतेको अविरल बर्षाका कारण कमल शाहीको घरमात्र होइन भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ काँडा ढिक लगभग पुरै डुवानमा प¥यो । जसले गर्दा कमलको घर पुर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भयो भने १० कठ्ठामा लगाएको धान बाली पनि नष्ट भयो । कमलका अनुसार घर सहित गरि १ लाख रुपैँया बढीको क्षति भएको छ । यतिबेला उनी बाढीकै कारण सडकमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् ।
काडा ढिककै पार्वतीदेवी शाहीको घर पनि बाढीले पुर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । ‘शरिरमा लगाएको एक जोर लुगा बाहेक केहि जोगााउन सकिएन’ उनले भनिन– ‘धन्न ज्यान जोगियो, लगाएको बाली सबै गयो, अब के खाने भन्ने चिन्ता छ ।’ पार्वतीदेवीको ५ कठ्ठामा लगाएको बालि नष्ट भएको छ भने घर पनि क्षतिग्रस्त भएको छ । उनका अनुसार बाढीले उनको मात्रै १ लाख ५० हजार रुपैँया भन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
बाढीले सडकमै बास बस्न पुगेका भजनी नगरपािलका वडा ८ का दिपक विक भने केहिदिन अघि मात्रै घर फर्किएका छन । बाढीले घर डुबानमा परेपछि उनी पनि बिस्थापित भएका थिए । गत साउन १४ मा आएको बाढीले भजनी नगरपालिकाका मात्रै २ हजार १ सय ६५ घरधुरी विस्थापित भएका थिए । जसमध्ये ९ सय २१ घर त पुर्ण रुपमा नै क्षतिग्रस्त भएका छन । बाढीले सबैभन्दा बढी भजनी नगरपालिका वडा न ८ र ३ मा क्षति भएको छ ।
पिडितलाई भोकमरीको चिन्ता
१४ साउनमा आएको बाढीले कैलालीमा चार हजार हेक्टर भन्दा धेरै जमिनमा लगाएको धानबाली पूर्ण रूपमा नोक्सान भएको छ । करिब दुई हजार ५०० हेक्टर धानबाली भने आंशिक रूपमा क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यस मध्ये भजनीमा भएको क्षतिको पुर्ण बिबरण भने अँझै आउन बाँकी नै छ ।
क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय दिपायलका अनुसार कैलाली जिल्लामा ७१ हजार ७ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफल जमीनमा धानखेती हुने गरेको छ ।
आम्दानीको श्रोत नै बाढीले सोत्तर पारेपछि यतिबेला कैलालीका किसानहरू भोकमरी हुने चिन्तामा छन् । कैलालीको भजनी नगरपालिका ३ धुसीका मधु भण्डारीको चार बिगाहा क्षेत्रफलमा लगाएको धानबाली पूर्ण रूपमा नोक्सान भएको छ ।
चैते धान समेत पानीले नोक्सान गरेपछि अब के खाने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको पीडा उनले सुनाइन्।
त्यस्तै धुसीकै सिताराम चौधरीको ८ बिगाहा क्षेत्रफलमा लगाएको धान समेत बाढीका कारण खेतमै कुहिएको छ । पहिला पनि बाढी आउने तर पानी बगेर जाने भएका कारण धान खेती राम्रो हुने गरेको थियो, चौधरीले भने अहिले त कामै नलाग्ने भएको छ ।
हेमेन्द्र भारद्वाजले आफूले लगाएको करिब ३५ बिगाहा धानबाली पूर्ण रूपमा नोक्सान भएको बताए । उनले भने, हिउँदे बाली समेत पानीले नोक्सानी गर्यो भोकमरी निम्त्याउने निश्चित अब के खाने भन्ने चिन्ता छ ।
‘गएका दुई आर्थिक बर्षमा उत्पादन राम्रै भएकाले पनि यो बर्ष उत्पादन हुने आशमा खल्लामा पनि धान खेति गरेका थिए’ भजनी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख कमल चौधरीले भने–‘तर सबै नष्ट भयो ।’
उनले भने –‘हामीले लगत संकलन गरेकाछाँै, बाढीले सबै भन्दा बढी क्षति गरेको वडा नं. ३ र ८ मा लगत संकलन भइसकेको छ ।’ जसमा २ हजार ५ सय १४ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको बाली नोक्सान भएको उनले बताए । त्यसपछि क्षति भएको वडा नं. ५ र ७ को बिवरण भने आउन बाँकी रहेको कृषि शाखा प्रमुख चौधरीले बताए ।
बाढीले डुबानमा परेको १ महिना पुग्नैलाग्दा पनि कुनै ब्यवस्थापन नभएको त्यहाँका स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय सागर शाहले भने–‘हाम्रो टोलबाट कोही पनि जनप्रतिनिधी छैनन् ,राहत आउँछ, अरु ठाउँकाले पाउँछन, हामी पाउँदैनौ ।’ उनले थपे–‘बाढी आएको एक महिना भन्दा धेरै भयो तर एक पटक राहत पाएका छाँै । त्यसपछि नेताहरु मात्रै पटक पटक अनुगमनमा आए तर राहत चाहिँ आएन ।’
काँडा ढिकका ५३ घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रत छन् । हुलाकि सडकमा बसोबास गरिरहेका पिडितहरु केहि सडकमै छन भने,केहि घर फर्किसकेका छन । घर फर्किए पनि डर भने अझै रहेको दिपक बिक बताउँछन । बाढीको डर कम भयो अब किराकाटीको डरले घरमा बस्न पनि समस्या छ उनले भने, सर्पले टोकेर एक जनाको ज्यान समेत गइसक्यो कसरी बस्नु?
पीडितले बनाए जंगलमै टहरा
पथरैया, मोहना, कान्द्रा र काँडा नदीको संगम क्षेत्रका रुपमा रहेको भजनी नगरपालिकामा १४ साउनमा आएको बाढीले विस्थापित भएका एक हजार भजनीवासीहरु अझै घर फर्कन सकेका छैनन ।
बाढी नआउने र सुरक्षित रहने भन्दै स्थानीय भजनी–१ मा रहेको महुन्याल सामुदायिक वन र भजनी–४ मा रहेको वनदेवी सामुदायिक वन समितिको क्षेत्रमा उनीहरु टहरा निर्माण गरेर बसोबास गरिरहेका छन ।
बाढीका कारण हालसम्म पनि घरमा बस्न योग्य नभएपछि त्रिपाल टागेर बसिरहेको भजनी–३ का दिपक जोशी बताउँछन । उनले भने –‘सरकारले हामीलाई सुरक्षित स्थानमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ, हैन भने हामी वन क्षेत्रमै स्थायी वासस्थान बनाएर बस्नेछौँ ।’ भजनी वडा नम्बर–५ का भानुभक्त बुढा पनि परिवार सहित टहरा निर्माण गरेर बन क्षेत्रमै बसेका छन् ।
‘बर्षौदेखि सुरक्षित वासस्थानका लागि पहल गर्दा हाम्रो कुरा कसैले सुनेन’ उनले भने–‘अव हामी आफ्नो व्यवस्था आफै गछौँ, सरकार हामीलाई चाहिँदैन ।
भजनी नगरपालिका ५ लाल्बोझीकी अस्मीता चौधरीले भनिन्–‘सधै भरी जोखिम मोलेर डुवान हुने स्थानमा बस्न सक्दैनाँै ।’ कान्द्रा नदीले जमिन कटान गर्दै जाँदा पुरानो घरमा बस्ने वातावरण नै नभएको गुनासो गर्दै उनले भनिन् –‘सरकारले व्यवस्था गर्छ भन्ने आश गर्दा गर्दै मरिने डर पो भयो, त्यसैले जंगलमा टहरा निर्माण गरी बस्न सुरु गरेका हौँ ।’
जनप्रतिनिधिहरुद्धारा अनुगमनका नाममा श्रृंखलाबद्ध भ्रमण तर उपलब्धि भने शुन्य
साउन १४ गतेको बाढी गाउँ पसेपछि अनुगमन सुरु भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह दलबल सहित बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा पुगे तर उनले अनुगमन गरेको एक महिना बितिसक्दा पनि उपलब्धि भने देखिएको छैन ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ताले अनुगमन गरे लगत्तै बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनीता चौधरी पनि भजनी पुगिन् । उनी सँगै त्यस क्षेत्रका संघिय सांसद पूर्व कृषि राज्य मन्त्री गौरीशंकर चौधरी पनि अनुगमनमा पुगे ।
प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको पुरै टोली नै निरीक्षण गर्न भजनी पुग्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल पनि निरीक्षणमा पुगे । तर बाढीपिडित भजनीबासीको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ ।
समितिले निरीक्षण गरेपछि सरकारलाई तत्काल राहत र पुर्नस्थापनाका लागि निर्देशन दिएपनि सरकारबाट अहिलेसम्म न पुर्नस्थापनाको पहल भएको छ न त सबैले राहत नै पाएका छन् । बाढीले क्षति पु¥याएको १७ दिनपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नै निरीक्षणमा भजनी पुगेका थिए । मुख्यमन्त्रीसँग अन्य केहि मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु पनि थिए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले डुबान क्षेत्रको अनुगमन गर्दै तत्काल र दीर्घकालीन योजना बनाएर समस्या समाधान गरिने बताएका थिए तर अहिले सम्म कुनै प्रकृया अघि बढेको छैन ।
मृतक परिवारलाई आश्वासन मात्रै
बाढीका कारण भजनीमा ३ जनाको मृत्यु भयो । साउन १४ गते आएको बाढीमा भजनी नगरपालिका–८ का ४० वर्षीय ईश्वर शाह ,३२ वर्षीय चन्द्र विक, ९ वर्षीय स्केल चौधरीले ज्यान गुमाएका थिए । उनीहरूको परिवारलाई नगरपालिकाले क्रिया खर्च बापत २५ हजार रुपैयाँ दियो । त्यस बाहेक अहिलेसम्म अरू केही नपाएको परिवारको गुनासो छ ।
‘हामीले नगरपालिकाका २५ हजार बाहेक राहत र क्षतिपूर्ति केही पाएका छैनौँ’ मृतक ईश्वर शाहकी श्रीमती शोभा देवी शाहले भनिन् –‘अहिले त खान नै समस्या हुन थाल्यो । ’
अनुगमनका नाममा दर्जनौँ पटक दजनौँ नेताहरू त्यहाँ पुगेपनि मृतकका परिवारका समस्याबारे कसैले चासो नदिएको उनले बताइन् । उनले थपिन् –‘मुख्यमन्त्रीले १ लाख दिन्छौँ भनेका छन्, हेरौँ कहिले पाइन्छ ।’ मृतकसंगै बाढीमा बगेका अन्य २ जनालाइ भने स्थानीयले उद्धार गरेका थिए ।
हरेक बर्षको बर्षायाममा डुब्छन घर
यस बर्ष मात्रै होइन कैलालीको भजनीका स्थानीयहरुले डुवानको समस्या हरेक बर्ष भोग्दै आएका छन् । ‘बर्षायामको समयमा सधै घर डुवान हुन्छन’ स्थानीय सुनिता जिसीले भनिन् –‘प्रत्येक बर्ष हामीले यो समस्या भोगिरहेका हुन्छाँै तर समस्या समाधानका लागि कराएकैछौँं, समाधान हँुदैन ।’
‘डुवानको समस्या समाधानका लागि पटक पटक सम्बन्धित पक्षलाइ आग्रह गरिरहेका हुन्छौँ’ स्थानीय जय बहादुर बुढाले भने –‘तर अझै समाधानका लागि कसैले चासो देखाएको छैन ।’ अघिल्ला बर्षहरुमा सामान्य रुपमा डुवान भएपनि यो बर्ष भने निकै क्षति पुगेको स्थानीय बताउँछन । यस बर्ष मानविय क्षतिका साथै कृषिमा पनि धेरै क्षति पुगेको छ ।
यता विपतका लागि भन्दै स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेका छन । भजनी नगरपािलकाले बिपतका लागि भन्दै ९२ लाखको राहत कोष स्थापना गरेको नगर प्रमुख शेर बहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।
बाढीले के कति क्षति गर्यो भन्ने बारे नगरपालिकाले सर्भे गरिरहेको बताउँदै उनले भने –‘क्षतिको यकिन बिवरण आयो भने राहतको कार्यलाइ अगाडी बढाउछौँ ।’ अहिले नगरपालिका, रेडक्रस लगायतले केही सामाग्री, राहत बितरण गरेको प्रमुख चौधरीले बताए ।
प्रदेश सरकारले पनि बाढी, पहिरो तथा डुवान जस्ता बिपद ब्यवस्थापनका लागि भन्दै १ करोड रुपैँयाको राहत कोष स्थापना गरेको छ । यस बर्ष सुदुपश्चिका अछाम, बाजुरा, दार्चुला, कैलाली लगायतका बिभिन्न जिल्लाहरुमा धेरै ठुलो बिपत परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले बताए ।
उनले भने –‘कैलालीको भजनी, जोशिपुर लगायतका क्षेत्रमा हामीले अनुगमन गरेकाछाँै, बिपतको अवस्थालाइ मध्यनजर गरेर पुर्न स्थापना र राहतको कामलाइ छिटै नै अगाडी बढाउनेछाँै ।’
काँडा, कान्द्रा, मोहोना नदी, रानी जमरा सिंचाई आयोजना, हुलाकी सडक आदिका कारणले भजनी लगायतका क्षेत्रमा डुवानको समस्या आएको बताउँदै मन्त्री शाहले भने–‘रानी जमरा, कुलरिया सिंचाई आयोजनाको तटबन्ध कार्यलाइ आयोजनाले पुर्ण बनाउनुपर्छ । अन्य नदीहरुलाइ तटबन्ध गरि हुलाकी सडकमा ठाउँ ठाउँमा पुलहरु बनाएर पानी निकासा ग¥यो भने डुवानको समस्या दिर्घकालिन समाधान हुनेछ ।’